* ပြင်ပမှရှုထောင့်များ: H150 * w410 * d350mm
* အထူ - တံခါး - 4mm, ခန္ဓာကိုယ် - 1.5mm
* n.w. (ကီလိုဂရမ်): 10kg
* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်
* mounting တွင်း: အောက်ခြေ၌ 4
ပုံစံ ပြင်ပအရွယ်အစား (MM) အထူ (MM) ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (MM) n.w (ကီလိုဂရမ်)
ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး တံခါးပေါက် ကိုယ်ခန္ဓာ ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး
ef-top-bg 150 410 35041.5 190 450 390 10
1. ဤအံဆွဲ Safe များသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခလုတ်ကိုသော့ခတ်ထားသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ချက်သော့ခတ်ထားသည်။
2. ၎င်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စကားဝှက်နှင့် back-up keys များဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
3 ။ -17 "က 14" လက်တော့ပ်။
4. ၎င်းကိုဟိုတယ်အခန်း, ရုံးခန်း, အိပ်ခန်း, လေ့လာရန်အခန်း, room ည့်ခန်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
6. ဤထိပ်တန်းအဖွင့်အဖွင့်သေတ္တာသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာရွက်စာတမ်းများ, ငွေ, လက်ဝတ်ရတနာများ, လက်ဝတ်ရတနာများ,
A: ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့မှာ 100% စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် QC စစ်ဆေးခြင်းရှိသည် ပေးပို့မီ။
2. လက် ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုပုံနှိပ်နိုင်ပါသလား။
3. လက် ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနိုင်မလား?
2. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
3. OEM ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်& ODM ဝန်ဆောင်မှု။
4. CE CE, ROSH, FCC
2004 ခုနှစ်မှစ. Foshan Woshan Woshan Woshan City တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်0န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည်မီးလောင်ရာများ, ရုံးလုံခြုံမှု, ဟိုတယ်များ, သေနတ်များ, သေနတ်များ, စီ။ အီး။ ယူနစ် 500,000 ကျော်ကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအိမ်, ရုံး, ဆေးရုံ, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည့်နယ်ပယ်များစွာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ Weierxin Safe သည်လူတို့နေထိုင်ရာ, အလုပ်နှင့်ကစားသည့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင်အကောင်းဆုံးအတန်းအစားတန်ဖိုး, အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, Weierxin Safe တွင်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူ 1000 ကျော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်အများအပြား၏ oem ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်ကုန်များကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းမြင်ပြီးတိုးတက်လာပြီးပိုမိုများပြားသောအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်နေတုန်းပဲ။ ကောင်းမွန်သော OEM နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်& OMD အတွေ့အကြုံ ..oem / odm အမှာစာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ r ကိုအတွက်ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိသည်&D, အထူးသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းဆိုင်ရာ safe တွင်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုစုဝေးစေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
* ပစ္စည်း: သံမဏိ* အပြင်ဘက်ရှုထောင့်များ: H200 * W450 * D370MM* အထူ - တံခါး -5မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် - 2mm* n.w. (ကီလိုဂရမ်): 11KG* Lock: ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါသောအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်* LED မျက်နှာပြင်* mounting တွင်း: နောက်ကျော၌2အောက်ခြေ၌ 4* လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအမှုန့်ကုတ်အင်္ကျီဆေးသုတ်ခြင်း။* အီလက်ထရောနစ် override မှအရေးပေါ်အခြေအနေများ& စက်မှုသော့* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံးခန်း / အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုခန်း / living ည့်ခန်း